Somalia: Dowladda maxey xoogga saari doontaa saddexda bilood ee soo socota ? - Wargane News
Home Somali News Somalia: Dowladda maxey xoogga saari doontaa saddexda bilood ee soo socota ?
Somalia: Dowladda maxey xoogga saari doontaa saddexda bilood ee soo socota ?
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/llahi Farmaajo, ayaa sheegay in saddexda bilood ee soo socota ay mudnaanta siin doonaan sidii ay bulshadda Soomaaliyeed u heli lahaayeen Cadaallad ay kuwada Qanacsan yihiin.
Mudane Farmaajo, ayaa hadalkaasi ka sheegay munaasabad lagu taageerayay 100-ka maalmood ee dowladda oo shalay lagu qabtay magaalladda Muqdishu.
Madaxweynaha dhinaca kale waxaa uu garsoorayaasha maxkamaddaha kula dardaarmay in ay cadaaladda ka shaqeeyaan, qofkii cadaaladda dhinac marana waxa uu sheegay in uusan dowladda iyo shacabka toona Matalin isla markaana uu mudan doono in la ciqaab.
Dowladda Soomaaliya ayaa 100-kii maalin ee lasoo dhaafay waxaa ay ku guuleysatay xoog saaridda shaqooyin kala duwan sida Xasilinta Caasimadda iyo waxyaabo kale, sida uu aaminsanyahay Aqoonyahan Maxamed Cali.
Dhinaca kale Aqoonyahanka ayaa sheegay in dowladda ay la kulantay caqabado aad u farabadan, taas oo looga fadhiyo in si xeeladeysan ay uga badbaado.
Magaalladda Muqdisho, waxaa ka socda hawl-gal loogu magac daray xaqiijinayo amniga caasimada waxaana magaalladda dibbadda looga saaray in ka badan 3000 oo kamida ciidanka Xooga dalka, waxaana la geeyey Jiidaha hore ee dagaalka si gaara Xerada Bali doogle, sida dowladda ay sheegtay.
Maxamed Cabdillahi Farmaajo
War Deg Deg Ah: Dekedda Berbera Oo Imika Dab Qabsaday Oo Wali Hilaacaysa
Somaliland: Weftigii Golaha Wasiirrada Somaliland Ee Dubai Ku Sugnaa oo Kulan La Yeeshay Madaxda DP World
Wargane TV: Daawo Dagaalkii Faysal Cali Waraabe VS Cali Mareexaan oo Istaadhmay
Deg Deg: Heshiiski Dp-World Ee Dakedda Berbera Oo Khilaaf Ka Dhex Curtay Iyo Wefti Balaadhan Oo Barito U Duuli Doona Dalka Imaaradka Carabta Iyo Ujeedada Socdaalkooda